iritis (မျက်နက်ဝန်းယောင်ခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » iritis (မျက်နက်ဝန်းယောင်ခြင်း)
iritis (မျက်နက်ဝန်းယောင်ခြင်း) ကဘာလဲ။
မျက်နက်ဝန်းသည် ဝိုင်းပြီး အရောင်ရှိသော မျက်လုံးအတွင်းယောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး အလည်ရှိအဖွင့်သည် သူငယ်အိမ်ဖြစ်သည်။
မျက်နက်ဝန်းသည် ကြွက်သားအမျှင် များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ထိုအမျှင်များက သူငယ်အိမ်အတွင်း အလင်းဝင်ခြင်းကိုထိန်းထားပေးပြိး အမြင်ရှင်းလင်းစေသည်။ မျက်နက်ဝန်းရှိ သူငယ်အိမ်သည် လင်းသောအချိန်တွင် ကျုံပေးပြီး မှောင်သောအချိန်တွင် ချဲ့သွားသည်။
အချို့သူများတွင် မျက်နက်ဝန်းယောင်လာပြီး မျက်နက်ဝန်းယောင်ခြင်းဟုခေါ်သည်။
iritis (မျက်နက်ဝန်းယောင်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
iritis (မျက်နက်ဝန်းယောင်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
မျက်လုံး သို့မဟုတ် မျက်ခုံးဝန်းကျင်ခြင်းနာခြင်း
မျက်လုံးနီခြင်း များသောအားဖြင့် မျက်နက်ဝန်းနား
iritis (မျက်နက်ဝန်းယောင်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
များသောအားဖြင့် မျက်နက်ဝန်းယောင်ခြင်းဖြစ်စေသောအကြောင်းကိုမသိပါ။ အချိုသောကိစ္စများတွင် မျက်လုံးထိခိုက်မိခြင်း မျိုးရိုးဗီဇနှင့် အချို့သောရောဂါများကြောင့်ဖြစ်တတ်သည်။ မျက်နက်ဝန်းယောင်ခြင်းဖြစ်စေသောအကြောင်းအရင်းများမှာ
မျက်လုံးထိခိုက်မိခြင်း။ တုံးသောအရာဝတ္ထု ချွန်သောအရာ သို့မဟုတ် လောက်ကျွမ်းစေသော ဓါတုပစ္စည်း သို့မဟုတ် မီး ကြောင့် ရုတ်ချည်း မျက်နက်ဝန်းယောင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ရေယုန် မျက်နှာတွင်ဖြစ်ပါက မျက်နက်ဝန်းယောင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အခြားသော ရောဂါများ ဥပမာ တောက်ဆိုပလပ်မိုးစစ် ဟစ်စတိုပလပ်မိုးစစ် တီဗီ နှင့်ကာလသားရောဂါ ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
မျိုးရိုးဗီဇ။ ကိုယ့်ဆဲလ်ကိုပြန်တိုက်သောရောဂါရှိသူများတွင် ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုထိခိုက်စေပြီး ရုတ်ချည်း မျက်နက်ဝန်းယောင်ခြင်းဖြစ်စေတတ်သည်။
ရောဂါများတွင် အန်ကိုင်လိုစင်းစပွန်ဒိုင်လိုက်တစ် ၊ရိုက်တာရောဂါ အူယောင်ခြင်း နှင့် ဆိုလာရီအေးစစ်အဆစ်ယောင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
ဘယ်ချက်ရောဂါ။ အနောက်ပိုင်းနိုင်ငံများတွင် မျက်နက်ဝန်းယောင်ခြင်းကိုဖြစ်စေသောရှားသည့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပါက အဆစ်ပြသာနာများ ပါးစပ်အနာ နှင့် လိင်အဂါၤအနာများဖြစ်စေတတ်သည်။
ကလေးရှိ ရူမတွိုက်အဆစ်ယောင်ခြင်း။ နှာတာရှည် မျက်နက်ဝန်းယောင်ခြင်းသည် ထိုအဆစ်ယောင်ခြင်းရှိသူတွင်ပိုဖြစ်တတ်သည်။
ကိုယ့်ဆဲလ်ကိုပြန်တိုက်သောရောဂါများတွင် သင့်ခန္ဓါကိုယ်အတွင်းယောင်နေသောဆဲလ်များကြီးထွားခြင်း မျက်လုံးပါအပါဖြစ်နိုင်သည်။
အချို့သောဆေးများ။ အချိုံသောဆေး ဥပမာ ပဋ္ဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေး ရိုင်ဖာဗျူတင်(မိုင်ကိုဗျူတင်) နှင့် အခြား ဗိုင်းရပ်သတ်သောဆေးများ စီဒိုဖိုဘာ (အိပ်အိုင်ဗွီကုသောဆေး) များကြောင့်လဲဖြစ်နီ်ုင်သည်။
ငါ့ဆီမှာ iritis (မျက်နက်ဝန်းယောင်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
မျက်နက်ဝန်းယောင်ခြင်းဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲခြင်း။ ကျန်းမာသော ကိုယ်ခံအားစနစ်ဖြစ်စေသောမျိုးရိုးဗီဇ ပြောင်းလဲပါက မျက်နက်ဝန်းယောင်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သည်။ နာမည်အားဖြင့်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ ဥပမာ ကာလသားရောဂါ သို့မဟုတ် အေအိုင်ဒီအက် သည် မျက်နက်ဝန်းယောင်ခြင်းဖြစ်နှုန်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။
ခုခံအားစနစ်နည်းခြင်း သို့မဟုတ် ကိုယ့်ဆဲလ်ကိုယ်ပြန်တိုက်သောရောဂါ။ ထိုအခြေအနေတွင် ဥပမာ အန်ကိုင်လိုးစင်း စပွန်ဒိုင်လိုးစစ် နှင့် ရီရက်တစ် အဆစ်ယောင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းက ပိုဖြစ်စေနိုင်သည် ဟုအချို့ကဆိုသည်။
iritis (မျက်နက်ဝန်းယောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
အပြင်မျက်လုံးပိုင်းစမ်းသက်ခြင်း။ အလင်းဘောပင်လေးနှင့် သင့်သူငယ်အိမ်ကိုကြည့်လိမ့်မည်။ မျက်လုံးတစ်ဖက်သို့မဟုတ် နှစ်ဖက်လုံးယောင်မယောင် နှင့် အရည်များထွက်ရှိမရှိကိုသိနိုင်သည်။
အမြင်စမ်းသပ်ခြင်း။ သင်အမြင်အာရုံကို မျက်လုံးဇယားနှင့် အခြားစစ်ဆေးမှုများနှင့်လုပ်လိမ့်မည်။
အတွှုင်းပိုင်းစမ်းသက်ခြင်း။ အထူးပြုလုပ်ထားသော အလင်းပါသော အနုကြည့်မှန်ပြောင်းကိုသုံးပြီး မျက်လုံးအတွင်းပိုင်းကိုကြည့်လိမ့်မည်။ သားငယ်အိမ်ကို မျက်ဆေးဖြင့်ချဲ့ထားခြင်းကြောင့် မျက်လုံးအတွင်းပိုင်းကိုပိုမြင်နိုင်သည်။
အကယ်၍ မျက်နက်ဝန်းယောင်ခြင်းဖြစ်စေတတ်သော ရောဂါရှိနေသည် ယူဆပါက ရောဂါကိုကုလိမ့်မည်။ ထိုကိစ္စများတွင် သွေးစစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းတို့လိုလာနိုင်သည်။
iritis (မျက်နက်ဝန်းယောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
မျက်နက်ဝန်းယောင်ခြင်း အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ အမြင်ကြည်လင်စေခြင်း နာခြင်းယောင်ခြင်း သက်သာစေရန်ဖြစ်သည်။ မျက်နက်ဝန်းယောင်ခြင်းသည် သူ့အားဖြစ်စေသောရောဂါရှိပါက ထိုရောဂါကိုပါကုရန်လိုအပ်သည်။
စတီးရွိုက်မျက်ဆေးများ။ ဂရူကိုကော်တီကွီုက်ဆေးများကိုမျက်ဆေးအဖြစ် အယောင်ကျစေရန်သုံးသည်။
သားငယ်အိမ်ကျယ်စေသောမျက်ခတ်ဆေး။ ထိုအရာများကြောင့် သားငယ်အိမ်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုနှောက်ယှက်နိုင်သောနေက်ဆက်တွဲများကိုသက်သာစေသည်။
သင့်လက္ခဏာများမသေချာပါက ပိုဆိုးလာသည်ဟုထင်ပါက ဆရားဝန်မှ သောက်ဆေး(စတီးရွိုက် နှင့် အခြားအယောင်ကျဆေးကို) သင့်အခြေအနေအပေါ်မူတည်ပြီးပေးလိမ့်မည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက မျက်နက်ဝန်းယောင်ခြင်းကိုကုသရာမှာဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများကသင့်အနေဖြင့် မျက်နက်ဝန်းယောင်ခြင်းကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
အနာသက်သာစေသောဆေးအနု ဥပမာ အစီတာမီနိုဖန်(တိုင်လီနော) သို့မဟုတ် အိုင်ဗျူပရိုဖန်(အဗေး) များက မသက်မသာဖြစ်စေခြင်းကိုသက်သာစေသည်။
Iritis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/iritis/home/ovc-20260341. Accessed August 25, 2017.